12 Chivabvu 2017
Oracle ine kuswedera mune dzimwe nyika dzinopfuura 145 uye inoshandisa iyo yakawanda yakawanda inotsvakurudza kuburikidza nekucheka kwekwenyanzvi teknolojia yekodhidhi, yakagadziriswa masangano, zvikamu zvehurumende, webhu uye makore kushandiswa uye mamwe akabatanidzwa uye akareba kusvika kune hurumende. Makombiyuta akawanda uye nekutyaira yekombiyuta uye Information Technology Corporation inowedzerawo kuwanda kwemakambani uye Zvigwaro zvekutarisira pasi pose uye zvinovabatsira kutora pane uye kufambira mberi mumakombiyuta uye IT industry.
Oracle courses and Certifications zvinowanikwa mumakwikwi uye zvikamu zvakaita se database, gore, maitiro, hutungamiri hutungamiri, masangano ekushanda, uye maonero pakati pevamwe. Icho Chibvumirano chiri mukati-maererano nesangano sangano iro rinowanikwawo muvhavha, kuchengetwa, kuvaka urongwa uye makore akachengetwa maitiro, pakati pevamwe.
Oracle Yunivhesiti iyi inomira pakati peavo vakatarisa mushure memavara evanhu vanoedza kutora chikamu muOracle vakaraira IT industry fragment. Kune humwe huwandu hwe1.8 Mamiriyoni Oracle hwakatsigira nyanzvi kunze uko inobvumira zvinodikanwa uye zvinotarisirwa zvehamba zhinji yebhizimisi, makampani, nevamwe. 93% yevashanduri vanoona kuti Oracle Certifications inokosha uye inonamira kune munhu anenge asarudzwa kuti ave nekodzero iyo ine Oracle Certifications seyakwanisa kutaurwa mairi. Chero Chipiro cheChiratidzo chichakuwana iwe zvishoma kudarika 7% mukuwedzera kwako mubhadharo, uye vamwe vanogonawo kupa kukwira munzvimbo. Zvakawanda zvemasangano eI IT nemasangano ari pamwe ne Oracle, uye kuvimbiswa kweOracle kunogona iwe pachako iwe unzvimbo mune mazita makuru aya mubhizinesi (akawanda maSuneune 500 masangano).
The Certifications level
Edza maitirwo emitemo
Kushanda kugadziriswa Zvitemo
Zviratidzo zveOracle zvinoshanduka mumatambudziko avo. Aya mazinga anotumirwa (mukuwedzera chikumbiro):
Oracle inowedzera kupa mamiriro ekugadzirisa kwekombiyuta kugadzirira. Kugadziriswa kweChechidzo kunoratidza neApplications, Database, Enterprise Management, Industries, Java, Operating Systems nevamwe. Kubvira zvino, kana iwe uchida kuve nechisimbiso kune chimwe chinhu kana teknolojia, iyo yakasimbiswa Oracle mutevedzeri iripo yekukubhadhara. Kunze kubva kuOracle pachako, kugadzirira kunogonawo kunge kwaenda kuOracle yakasimbiswa pawebhu uye yakabviswa kuisa pfungwa yekudzidziswa.
IOracle online library uye nzvimbo dzakawanda dzakasiyana dzinogona kukupa mose iwe kugadziriswa zvinhu zvaunofanirwa kuita kuti zviwanikwe. Kuwedzeredza kunowanikwa kune mafundo uye mapoka ekushambadzira anowedzera iwe kukubatsira kugadzirira zvakakwana kuburikidza nemararamiro akanaka. Muenzaniso wekuongorora mapepa uye nhaurirano zvinogonawo kushandiswa kuti uwirirane nehupenzi uye boka rezvenzvi uye zvakawanda zvemarudzi akasiyana ekugadzira zvinhu. Oracle zvinyorwa zvose zvakakosha zvekuongorora zvidzidzo uye makirasi ekurairidza paCheji chekuongorora peji, uye kubva zvino iwe unogona kuramba wakadzidza uye uchishandisa zvinhu zvacho pasina.
Sezvambotaurwa kare, Oracle Certification inoratidza nezvayo zvinhu. Sangano rakaita kuti chirongwa chekudzidzisa chichengetedze mupfungwa yekuguma chinangwa chekugadzira vashandi vane ruzivo vane unyanzvi mukugadzirisa teknolojia yekugadzirisa iyo inogadzira. Tinogona kuratidza Oracle Certifications munharaunda dzinosanganisira:
Chimwe chikamu cheOracle Certifications hachina kutarisirwa, izvo zvinoreva kuti hakuna vakwevedzeri pakati pekuongorora kweChishanu. Izvi zvinodhura $ 125. Vakapiwa Oracle Certifications vakatora purogiramu yakapoteredza $ 250, uye kana muchiitiko chekuda kuchengetedzwa kuburikidza neizvi, muchazodiwa kutora muongorori kuOracle unofungisisa kana pa Pearson VUE, nzvimbo yekudzidzisa yeOracle.
Isu tinozoongorora zvidzidzo zve Oracle Certification.
Kune dzakapoteredza 80 zvakasiyana-siyana kuungana kwezvinhu uye zvinhu pasi pe "Kushanda" Chikoro chekudzidzira che Oracle kudzidziswa. Izvi zvinosanganisira Agile, Siebel, Hyperion, Demantra, Primavera, E-business suite, GRC uye JD Edwards Enterprise Rimwe pakati pevamwe. Iko kune zvakapoteredza 60 Zvitemo zvakasiyana-siyana munharaunda iyi uye zvinhu zvinowanikwa nekutsvakurudza, kuedza kuronga, kushanda / kugadzirisa kuronga, zvikamu uye zvimwe zvinoshanda uye zvinokonzera nzvimbo.
Chikoro cheOracle Cloud Certification chinosanganisira Zvitatimende zvinoratidza zvose Oracle uye gore rejasva. Idzidzo dzepamusoro dzakachengetedzwa Kushamwaridzana uye Professional pakati pevamwe. Izvi Zvikwereti zvinobatsira kunyatsonzwisisa kuti ungashandisa sei Cloud uye kuita mabasa akadai sekuurayiwa, kusimuka, kubudirira uye vamwe. Izvi zvinoratidza kuti gore rakagadzirwa, gore, mapurogiramu uye rinobatsira kubhizimusi masimba sekuungana, HR, uye ERP pakati pevamwe.
Muchiitiko icho iwe unoda kutora ruzivo uye unyanzvi mukushandiswa uye nekushandiswa kweOracle databases, izvi Zvigwaro zvinofanira kuva sarudzo yako. Oracle inopa zvakawanda kupfuura 40 databases dzinoramba dzichikwira uye dzinovandudza kuchengeteka uye kuderedza iyo IT inenge ichipa huwandu hwakawanda hwezvakasiyana zvakasiyana izvo zvinopikiswa hazvigone kupa. Masangano akazara mukati mawo maChitatimenti anopiwa anowedzera "My SQL" uye "Database Application Application" pakati pevamwe.
Icho Chibvumirano chinopiwa muzvikamu zvakare kusanganisira shamwari, nyanzvi, ace, master, uye pro.
OCA: OC Certifications ndiyo iyo inodzidzisa hutano hwekushanda hunoenderana nehuwandu hwemashoko. Iwe unogona kutarisa pamusoro pe 12C SQL Certification, 12C SQL nheyo dzeChechi, 11g SQL key Certification, uye SQL master Certification.
OCP: Izvi Zvakatemerwa zvakagadzirirwa kuisa humwe hutano hwakagadziriswa hunoonekwa nehuwandu hwemashoko muvadzidzi. Nekubudirira kweChipatimendi iwe unofanira kupedzisa kugadzirira uye kudzidzira nzvimbo yekugara uye nekupfuurira mberi kupedza kuongorora kweOracle iyo inoratidza neDNA 12C.
OCM: The ace level level Certifications ine mutevedzeri weZvivheti sevadzidzi varo. Kubvumirwa kunoratidza ne database 12C. Iwe unofanirana nekutarisa kwekudzoka kweAce uye unofanirwa kuwana mafundo maviri, pakati pezvikamu zvakasiyana-siyana zvichengeta mupfungwa mugumo wekupedzisira kuti uwane Chiratidzo.
OCE: Oracle Certified Cert certification inosanganisira deta yemutariri wevatariri, kunyanya kugoneka, kushandiswa kwehutungamiri, Grid-framework mutungamiriri uye nzira yekugadzirisa maitiro uye Zvigwaro.
Apo iwe unoda chokwadi uye ukapindira kubatanidzwa mukuedza kushandura matanho, ichi ndicho Chigwaro chekutora. Iro rinosvika pakusvika kwehupenyu hwehupenyu hwehutano hwehutano hunobatsira nyanzvi kuti ataure uye atarise nezvose zvezvinoshandiswa uye deta inowanikwa nechinangwa. Kugadzirirwa kwechikwata ichi kunosanganisira Oracle yekuedza kupedza zvakaperera, Oracle mutungamiri wekuita, uye Oracle mukuru mukuru Ops anotarisa. Zviti zvinyorwa zvinowanikwa muzvikamu izvi ndezvi:
Oracle ventures Zvipupuriro: Munharaunda iyi yega yega inosvika pakuwanika 25 idzo dzeZvito dzinotarisirwa kuchengetedzwa, hurumende dzehutungamiri hwemashumiro, kugoverana, basa, zvekutengesa uye kune vamwe vatengi uye mabhizimusi ehurumende. Idzi ndidzo Inyanzvi dzeZvivhesiti uye dzinogonesa zvigadziriswa zvinowanikwa nekugadzirwa kwekombiki yeOracle kune mamwe mabhizimusi nemasangano.
Oracle foundation Certification: Ichi chiyeuchidzo chinokuyeuka iwe semuongorori weIndaneti uyo anogona kunyatsogadzirira, kurondedzera uye kugadzirisa Oracle solutions uye IT mhando. Zvakakodzera kuti vatungamiri vatungamirire, Maitikiti anoita kuti iwe uwane simba mukuita zvose Oracle ventures panguva iyowo kukupa simba mukutonga kweboka. Icho Chibvumirano chaunokwanisa kubudirira chinosanganisira nyanzvi yeI IT design execution uye yekutengesa upenyu hwehupenyu hwekushandisa shandise.
Oracle java nekatiware Certifications: Kufambira mberi kwehupenyu munzvimbo iyi kunosanganisira kuwirirana kweM Cloud uye kushanda, bhizinesi rekushandura, java, nekugadzirisa pakati, hutungamiri hwehutano, nevamwe. Icho Chibvumirano chinokupa maitiro akanangana nekufambira mberi aya akaparadzaniswa muzvikamu zvakasiyana-siyana, izvo zvinotenderera mberi zvose zveZvibvumirano, kusanganisira shamwari, unyanzvi uye unyanzvi pakati pevamwe. Vimbiso zvinyorwa zvinosanganisira java software injini, java designer, sarudzo yegadziriro, musoro wegadziro nevamwe.
Oracle working frameworks Certifications inosanganisira boka reSolaris uye kuchengeteka, uye Linux Administration. Mumwe anogona kutora zviti Zvinyorwa pamusana pepayimusi, ruzivo rwehutano, uye boka rekudzidza. Oracle working frameworks iri mune chikumbiro chegigantic crosswise pamusoro pebhizimisi verticals sezvo zvigadziriswa zvinodhura pasi uye zvinopa kugona kunoshamisa uye kuchengeteka. Pano iwe uchanzwa nezvemahombekombe ari kure, index index, mamanzura uye denga ndiro muganhu kubva ipapo! Vadzidzisi vekuuraya uye vatungamiri vachaona izvi Zvitemo zvakabatsira.
Zvitemo zvinoratidza neLinux ndezve OCP uye OCA inoronga mutungamiri. Maitikiti, uye Linux 6 chiremera. Chiremera Chikwereti ndechokuti zviitiko zve Oracle chete.
Pakati peZvibvumirano zveSolaris ndiOCP uye OCA mutariri. Zvidzidzo. The pro level Certifications ndiyo Kuiswa uye kushandiswa kushandiswa kushandiswa.
Vadzidzi veOracle OU vanogona kukubatsira kugadzirirwa muhutano hwe Virtu uye nekukubatsira iwe kutora Oracle virtualization Certifications. Maitiro ekugadzirwa kwemashoko ndiwo datacenter centric uye anobatsira mukugadzirisa kwezvinhu kuburikidza nekugadzirisa. Kubudirira kwevashandi kunobatsira mukuderera kwezvinhu zvekugadzirwa kwezvinhu uye mukuvandudzwa kwehutungamiri hwekutsvaga kwezvinhu.
The pro level level Certifications pano iDesktop Infrastructure execution expert. Iyo inoratidzira ne-sun-beam zvinhu uye desktop yakazara. IVM 3 kushandiswa pro Zvidzidzo ndeyepakati yepamusoro Matitiko.
Nzira Yokuwana Sei Solaris Certification - 1z0821 & 1z0876